အိုဆာကာကနေနာဂိုယာမှအိုဆာကာကနေသွားဖို့ကဘယ်လို Nagoya- သလော - Samurai and Ninja in Japan
အိုဆာကာကနေနာဂိုယာမှအိုဆာကာကနေသွားဖို့ကဘယ်လို Nagoya- သလော
နာဂိုယာမှအိုဆာကာ မှစ. သွားကြဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အဆိုပါကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ခြင်းမီးရထားနှင့်အခြား transportatin အခြားနည်းလမ်း
နာဂိုယာမှအိုဆာကာကနေသွားကြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထား (အိုဆာကာ-နာဂိုယာ) ၏ကုန်ကျစရိတ်တလမ်းများအတွက်¥ 5830 ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်အသွားအပြန်ခရီးစဉ်အတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်¥ 11660 ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအိုဆာကာ-နာဂိုယာကျည်ဆန်ရထားစီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 နာရီဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထား 6:00 pm တွင်အိုဆာကာကနေထွက်ခွာ။ နောက်ဆုံးကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထား 22:30 pm တွင်အိုဆာကာကနေထွက်ခွာ။ တစ်ဦးကျည်ဆန်ရထားကျည်ဆံရထားဝန်ဆောင်မှုတိုင်း 10 မိနစ်ရှိပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်းကြိုတင်ယူထားနိုင်ပေမယ်ကဘူတာရုံမှာလက်မှတ်မဝယ်ဖို့ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
JR-PASS, သငျသညျအခမဲ့များအတွက်ကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ခြင်းရထားကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်တစ်ဦး JR-PASS, ရှိပါက, သင်သာ HIKARI-ကျည်ဆန်ရထားကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်တစ်ဦး JR-PASS, ရှိပါကသင်သည်အပေါငျးတို့သကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ခြင်းရထားကိုအသုံးမနိုင်။ ဂျပန်တွင်ရောက်ရှိလာရှေ့တော်၌ထို JR PASS, ဝယ်ယူရန်ပေးပါ။ သငျသညျဂျပန်ရောက်ရှိပြီးနောက်ကိုသင် JR-PASS, ဝယ်ယူရန်လို့မရပါဘူး။
ပထမဦးစွာ3လှည်းသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုငျလိုခငျြထိုင်နိုင်, Non-ယူထားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အခြားလှည်း reserved နေကြတယ်, သင်သည်သင်၏ထိုင်ခုံကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်။ သငျသညျ (သူတို့ထဲကအားလုံးမဟုတ်) ကကျည်ဆန်ရထားကျည်ဆံရထားပေါ်တွင်သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျသောကြာနေ့ညနေခင်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အများပြည်သူအားလပ်ရက် (ဥပမာရွှေအပတ်, နယူးတစ်နှစ်ရဲ့အကြို, etc) ကာလအတွင်းခရီးသွားလာ အကယ်. non-ယူထားတဲ့အပိုင်းတစ်ဦးထိုင်ခုံရနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကြိုတင်မဲအတွက်သင့်ရဲ့လက်မှတ်ကြိုတင်ယူထားပါ။
အဆိုပါကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထား၏ဇိမ်ခံအပိုင်းရှိပါသည်။ ဤအပိုင်းကို၏အမည်ကို “အစိမ်းရောင်ကားတစ်စီး၏။ ” သင်ဟာ JR-PASS, အတူဒီအထူးပုဒ်မမသုံးနိုငျသညျ။ သငျသညျ¥ 2960 ပေးဆောင်နေလျှင်အပိုငျသညျကို “အစိမ်းရောင်ကားတစ်စီး။ ” ကိုသုံးနိုင်သည်
သင်ကကျည်ဆန်ရထားအစာရှောင်ရထားပေါ်တွင်သားညှပ်ပေါင်မုနှင့် lunchbox ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ် 1000 ယန်းန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
လေယာဉ်ပျံဟာကျည်ဆန်ရထားကျည်ဆံရထားထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးစျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါတယ်။ လေဆိပ်မြို့လယ်ထဲမှာမကြောင့်လူအများစုဟာကျည်ဆန်ရထားကျည်ဆံရထားကိုရွေးချယ်ပါ။ တစ်ဦးလေယာဉ်ပျံလက်မှတ်ကြိုတင်ယူထားနှိပျပါ ကဒီမှာ
ခရီးသွားလာစျေးအချိုဆုံးလမ်းဘတ်စ်ကားယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုသန်းခေါင်တိုင်အောင်ရှိပါသည်။ 3000 ယန်းတစ်ဦးအသွားအပြန်လက်မှတ်ဘို့တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ် 4.750 ယန်း – ဘတ်စ်ကား၏ကုန်ကျစရိတ်န်းကျင် 2,000 ကနေနေကြပါတယ်။ ကကျည်ဆန်ရထားကျည်ဆံရထားထက်3ကြိမ်နှေးကွေးသောကွောငျ့လူအမြားစုကဘတ်စ်ကားကိုရွေးချယ်ကြပါဘူး။ ဘတ်စ်ကားများ၏အချိန်ဇယားကိုစစျဆေးဖို့နှိပျပါ ကဒီမှာ
အဆိုပါကျည်ဆန်ရထားကျည်ဆံရထားကြိုတင်ယူထား အွန်လိုင်း ။
ကျနော်တို့ မှလွဲ. (သင်စောင့်ဆိုင်းနေစရာမလိုဘဲရထားဘူတာရုံမှာလက်မှတ်မဝယ်နိုင်သည်) တစ်ဦးကျည်ဆန်ရထားကျည်ဆံရထားဝန်ဆောင်မှုမကြာခဏဃလည်းမရှိ) ရထားဘူတာ conveneiently မြို့လယ်က c အတွက်တည်ရှိသည်) က) တစ်မူထူးခြားသောယဉ်ကျေးမှုအတှေ့အကွုံမြားခကြောင့်ကျည်ဆန်ရထားကျည်ဆံရထားကိုယူပြီးအကြံပြု အလုပ်များနံနက်နာရီ) ။
Categoriesဘလော့ Myanmar TagsBuulet ရထား, ကနာဂိုယာမှအိုဆာကာ မှစ. ရရှိရန်မည်သို့ကုန်ကျပါဘူးဘယ်လောက်, ကျည်ဆန်ရထား အစာရှောင်ခြင်းရထား, ဂျပန်မှအိုဆာကာကနေခရီးသွား, ဂျပန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဂျပန်အတွက်ခရီးသွား, နာဂိုယာ, ဘတ်စ်ကား, ရထား, လေယာဉ်ပျံ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သွားကြဖို့ကိုဘယ်လို, အစာရှောင်ရထား, အိုဆာကာ, အိုဆာကာ မှစ. နာဂိုယာရန်
Previous PostPrevious Хирошима хотоос Киото хүртэл – Хирошима хүртэл Киото руу хэрхэн очих вэ?
Next PostNext ကျိုတိုကနေဟီရိုရှီးမားမှကျိုတိုကနေသွားဖို့ကဘယ်လို Hiroshima- သလော